Fananan-tany : Fanohanana 15 tapitrisa Dolara avy amin’ny banky Iraisam-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaFananan-tany : Fanohanana 15 tapitrisa Dolara avy amin’ny banky Iraisam-pirenena
Tany 500.000 amin’ny 10 tapitrisa ihany no misoratra ara-dalàna amin’ny tompony. Ho fampananana karatany ho an’ny Malagasy, nahazo fanohanana ara-bola mitentina 15 tapitrisa Dolara na manodidina ny 42 tapitrisa Ariary avy amin’ny banky iraisam-pirenena isika. Noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, omaly, ny delegasiona avy amin’ny banky iraisam-pirenena nahitnaa ny solontena maharitra eto amintsika, Coaralie Gevers sy ny Talen’ny paik’ady Anna Wellenstein ary Jorge A. Munoz. Entina hanatanterahana fandaharan’asa hampananana karatany ho an’ireo malagasy izay manana tany kanefa tsy mbola misoratra aminy ara-dalàna io sora-bola io.
Tafiditra amin’ny anton-dian’ireto delegasion’ny banky iraisam-pirenena ireto ihany koa ny fijerena ny zava-misy marina iainan’ny mponina, ny zava-bitan’ny fitondram-panjakana manoloana ny fananan-tany ary nizaran’ izy ireo ny traikefany. Io fahitana ifotony ny zava-misy io no sehatra nanainga io fanohanana io. Hisy ny fametrahana kaominina fitaratra amin’ny fanantanterahana ny fandaharan’asa.